I-InVideo: Dala Amavidiyo Wokwezifiso Wobungcweti Kwezokuxhumana Komphakathi Ngaphakathi Kwemizuzu | Martech Zone
I-InVideo: Dala Amavidiyo Wokwezifiso Wobuchwepheshe Wenhlalo Yezindaba Ngaphakathi Kwemizuzu
NgeSonto, ngoMashi 7, 2021 NgeSonto, ngoMashi 7, 2021 Douglas Karr
Kokubili i-podcasting nevidiyo ngamathuba amangalisayo okuxhumana nezethameli zakho ngendlela ebamba iqhaza kakhulu futhi ejabulisayo, kepha amakhono wokudala nokuhlela adingekayo angaba kude kakhulu nezindlela zamabhizinisi amaningi - ingasaphathwa isikhathi nezindleko.
I-InVideo inazo zonke izici zesihleli esiyisisekelo sevidiyo, kepha ngezici ezingeziwe zokubambisana nezifanekiso ezikhona nezinsizakusebenza. I-InVideo inezifanekiso ezingaphezu kwe-4,000 ezenziwe ngaphambilini zevidiyo nezigidi zamafa (izithombe, umsindo, namavidyo kliphu) ongazihlela kalula, uzibuyekeze, futhi uzilande ukuze zikusize ekwakheni ama-intros, ama-outros, izikhangiso zevidiyo, noma wonke amavidiyo ozowasebenzisa kwezokuxhumana.
I-InVideo yenzelwe amabhizinisi, ochwepheshe bezentengiso, nabasebenza ngokuthengisa ukudala kalula nokushicilela amavidiyo abo. Ipulatifomu ikuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso i-akhawunti yakho ngesitayela sakho sokuklama futhi usebenzise amacala ukuze lezo zifanekiso zibekwe phambili.
Ungenza ngokwezifiso i-akhawunti yakho nge-logo yakho, amafonti, nemibala eyinhloko ukuze isetshenziswe kalula kuzifanekiso zakho. Kuvidiyo ngayinye, ungafaka i-voiceover yakho, ividiyo, umsindo, noma izithombe ongathanda ukuzifaka - ngakho-ke awukhawulelwanga kumathempulethi abo noma kumtapo wezimpahla.
Ungaxhuma futhi ama-akhawunti wakho we-Facebook, Twitter, ne-Youtube futhi ushicilele ngqo kusuka kusixhumi esibonakalayo lapho usubukeze futhi wavumela ividiyo esephothuliwe.
Thola ama-25% Wokubhaliselwe Okubhaliswe Kuvidiyo
Ukuhlelwa Kwe-athikili Ku-Video
Ithuluzi elilodwa elimnandi abanalo ukukwazi ukukopisha noma ukunamathisela umbhalo, noma ngisho nokusula umbhalo kusuka ku-athikili. Ngakho-ke, uma ufuna ukudala amavidiyo amafushane, amafushane afaka amaphuzu abalulekile asuka ku-athikili yakho ukukhuthaza ngezokuxhumana nabantu.
Yakha Amavidiyo Ohlu
Ukusetshenziswa okuhle kakhulu kwalokhu ukwenza amavidiyo we-listicle… adume kakhulu ngemidiya yezenhlalo. Ngikwazile ukwakha le vidiyo cishe imizuzu eyi-10, ngilayisha izithombe-skrini zami ngisebenzisa esinye sezifanekiso ze-InVideo eziningi ze-Listicle:
Isibonisi se-Storyboard sokwenza izindaba noma ama-listicles sinembile futhi kulula ukusisebenzisa. Ungakwazi nokunamathisela kwiskripthi sakho futhi ukwenze kube okuzenzakalelayo ngokususelwa kuthempulethi!
Amavidiyo we-Intro and Outro ane-Logo Reveal Templates
Namuhla, ngikwazile ukuhlela nokuklama ilogo encane egqwayiziwe ye-animated ye-my Martech Zone amavidiyo asebenzisa ithempulethi yokwembula ilogo ye-InVideo:
Ngikwazile ukuguqula amafonti, ubude besikhathi bento ngayinye, kanye nokugqwayiza ukuklama ividiyo emnandi engingakwazi ukuyifaka kuwo wonke amavidiyo engiwashicilela ku-Youtube!
Bhalisa ku Martech Zone ku-YouTube
Ungayakha Kanjani Ividiyo Kusifanekiso Se-InVideo
Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi sokuqalisa ividiyo yakho silula ngendlela emangalisayo… khetha isifanekiso esenziwe ngaphambilini, ithempulethi yombhalo kuya kuvidiyo, noma qala nje ngendwangu engenalutho.
Uma ufuna ithempulethi, vele ufake amagama ambalwa wokucinga. Ungachofoza bese udlala ngamunye emiphumeleni ukuthola isifanekiso ofisa ukuqala ngaso.
Khetha ubukhulu bevidiyo - banzi (16: 9), isikwele (1: 1) noma mpo (9:16).
Yenza okukhethayo, wenze ngokwezifiso ividiyo, bese uyayilanda noma uyishicilele ngqo ku-Facebook, Twitter, noma ku-Youtube.
Uma ufuna ukwenza ngezifiso ividiyo ngokuqhubekayo, nakhu ukuhamba okuhle ngezinketho zepulatifomu. Akunamkhawulo nhlobo!
Uma ufuna ukwenza ngokwezifiso ividiyo iqhubeke, nansi ukuhamba okuhle ngezinketho zepulatifomu. Akunamkhawulo nhlobo! Futhi ... ngeke ukholwe intengo yesikhulumi… iyamangalisa.
Oh… futhi njengoba ungumuntu Martech Zone umfundi, uzothola esinye isaphulelo esingu-25% lapho usebenzisa isixhumanisi sami:
Ukuzikhulula: Ngingu- I-InVideo inxusa (nekhasimende) futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami kuso sonke lesi sihloko.
Tags: Umakhi wevidiyo ye-FacebookUmenzi wevidiyo wesikhangiso se-FacebookIsihleli sevidiyo ye-instagramumenzi wesingenisoungenayoisimemo sevidiyoi-listicle videoumdali wevidiyo eku-inthanethiisihleli sevidiyo esiku-inthanethiumenzi ongaphandlePromo umenzi wevidiyoividiyo emfushaneividiyo yezokuxhumanaividiyo yomphakathiumdali wezikhangiso zevidiyoumenzi wesikhangiso sevidiyoumenzi wevidiyoizifanekiso zevidiyoUmenzi wesingeniso se-YouTubeUmdali wevidiyo we-YouTube